Game Archives | Kingdom of news
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition ကို Steam, PSN, Xbox Live တို့တွင် free ပေးနေ
PlayStation5ရဲ့ first look ပုံစံ
Mobile အတွက် League Of Legends: Wild Rift
PUBG PC Version ကို Steam တွင် ဒီအပတ်အခမဲ့ကစားနိုင်
Unicode Gamer တွေအတွက်ကတော့သတင်းကောင်းပါပဲ။ PUBG PC version ကို Steam မှာ June4ရက်နေ့မှ June 8 ရက်နေ့ထိ အခမဲ့ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီ event အတွင်းမှာ...
Unicode 2020မှာအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်​ပေးချင်ပါတယ်။နာမည်ကြီး Riot Games မှတီထွင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Valorant (FPP/Shooter) ဂိမ်းအသစ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။Riot Games ဟာနာမည်ကြီး League Of Legends(Moba)ဂိမ်းကိုထုတ်လုပ်ထား​သောဂိမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Valorant ဂိမ်းကို 2019 တွင် codename project A...
Epic Games Store မှနာမည်ကြီး World War Z ဂိမ်းအပြင် အခြားဂိမ်းသုံးမျိုးကိုပါ free ရယူနိုင်
World War Z ဂိမ်းသည် zombie/ third person shooting game အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မိမိသူငယ်ချင်းများနှင့် စုစုပေါင်းလေးယောက် အွန်လိုင်းမှချိတ်ဆက်ကစားနိုင်ပါသည်။ World War Z ၏ထူးခြားချက်မှာ ဇွန်ဘီများက မြန်ဆန်လွန်းပြီး...
COVID-19 ကြောင့်အိမ်တွင်းပုန်းပြီးဆော့ဖို့အတွက် Free ပေးနေသော PC Game များ
COVID-19 ကြောင့် ရုံးများ၊ ကျောင်းများ၊ သင်တန်းများ ပိတ်နေချိန်တွင် Gamer များအတွက်လည်း Steam နှင့် Epic Games မှ Dollar နှင့် ဆော့ရသော Game များအား Free To...
Razer က အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Razer Hammerhead True Wireless earbuds
Unicode Razer gaming brand ကို games ကစားတဲ့လူ​တွေမသိတဲ့လူမရှိပါဘူး။ Razer ဟာ gaming ပစ္စည်း​တွေထဲမှာ အ​ကောင်းဆုံး brandတစ်ခုမှာပါဝင်​နေပါတယ်။ Razer brand ကထုတ် လုပ်တဲ့gaming ပစ္စည်း​တွေက​တော့ Laptops,Mice,Mats,Keyboards,Mobile,Headsets &...
Call Of Duty: is one of the most successful games
Call Of Duty: We played on Pc, Playstation, and Xbox, and the FPS (shooter) game is one of the most...
One of the most popular game was our favorite Frozen Throne Warcraft III
One of the most popular game was our favorite Frozen Throne Warcraft III (Strategy / RTS). When we are childhood,...
Fortnite game isaShooter / Battle Royale game
Fortnite game isaShooter / Battle Royale game that was released in 2017 in Epic Games. Fortnite game is...
Moonton has released the game "Magic chess: Bang Bang" after Mobile Legends: Bang Bang and Mobile Legends: Adventures. Magic chess:...